> Resource > Mac > MacBook Hard Drive Recovery Tutorial
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga MacBook Hard Drive?
Hi oo dhan, naagtayda MacBook ayaa joojiyay ka shaqeeya. Waxaan qabaa inay tahay dayactir ka baxsan. Halkan waxaan waydiinaya oo ku saabsan sida aan dib u soo ceshano karo xogta ka MacBook drive adag. Waan ogahay qaabka drive adag tahay HFS. Sidaas, cid ii sheegi kartaa xal qaar ka mid ah? Best xiriira.
MacBook musuqmaasuqa drive jabay ama adag noqon kartaa dhibaatada ugu xun ee aad u. Uma isticmaali kartid in aad MacBook dambe oo aad loo maleeyo in laga yaabo in dhammaan xogta ku saabsan drive MacBook adag lagu lumin. Laakiin waa tan ku saabsan runta? Jawaabta gabi ahaanba ma jirto. Weli waxaad leedahay fursad in ay soo celiso xogta ka MacBook drive adag, xitaa haddii aadan reboot kartaa MacBook.
Halkan waa soo jeedin: qaadan aad drive MacBook adag oo ku xirmaan computer kale Mac, ka dibna waxaad isku dayi kartaa kabsaday xogta ka iyadoo la kaashanayo MacBook drive adag utility ah soo kabashada sida Wondershare Data Recovery for Mac . Waxaa soo kabashada xogta xunna loogu talagalay Mac u saamaxaya in aad ka bogsato xogta tiro ka adag drive MacBook, oo ay ku jiraan images, videos, document files, emails, iwm No arrin aad xogta lumay ka MacBook caafimaad ama ka MacBook ka jabay / kharribeen , qalab si fudud u fududayn kartaa in aad xanuun.
Download version tijaabo ah Wondershare Data Recovery ka hoos ku qoran, ka dibna aad qaban karto MacBook drive adag in qasabno yar.
Kabsado Xogta laga MacBook Hard Drive in 3 Talaabooyinka
Haddii aad doonaysid in aad soo celin xog ka drive adag on MacBook caafimaad, waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay soo baxdo iyo rakibi Wondershare Data Recovery aad MacBook oo aan bilowno in iskaan drive adag;
Laakiin haddii aad MacBook ahayd la jebiyey ama kharribeen, waxaad u baahan tahay in la isticmaalo computer kale Mac inay sidaa sameeyaan.
Haddaba ee soo kabsado xogta ka drive adag on caafimaad MacBook drive adag.
Tallaabada 1 Daahfurka Wondershare Data Recovery for Mac inuu ku soo bilowdo MacBook kabashada xogta drive adag
Marka rakibidda oo bilaabeyna Wondershare Data Recovery, aad arki doonaa interface ah in aad siisaa dhawr fursadood oo dib u soo kabashada. Halkan waxa aad marka hore qaadan kartaa "lumay Recovery File" sida isku day ah.
Halkan Aan isku dayno leh "lumay Recovery File" mode inuu ka soo kabsado images tirtiray ka Mac Mini. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa tilmaamaha uu furmo suuqa dooro hababka kale ee kugu habboon ugu.
Fiiro gaar ah: suuqa kala Barnaamijka waxaa ku taxan tilmaamaha ah ee fursadaha kabashada kala duwan, fadlan dooro mid ka mid ah in la kulmo aad u baahan tahay inta badan.
Tallaabada 2 Scan MacBook drive adag tahay in la raadiyo xog laga badiyay
In tallaabadaas, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan drive ay xaq u adag oo guji "Scan" inaad raadiso files lumay.
Fadlan dooro qaab sax ah file ah oo aad drive MacBook adag by "System Scanning File Dooro" furmo. Oo haddii faylasha aad ayaa formatted ka drive MacBook adag, waxa kale oo aad "Enable Deep Scan" kartaa in uu furmo.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad soo kabsado xogta ka jabay MacBook ah, fadlan hubi in drive ay adag tahay in si wanaagsan loo-xiran karo computer kale Mac sameeyo.
Tallaabada 3 ceshano xogta ka MacBook adag la wado eegista
Ka dib markii iskaanka, dhammaan faylasha kabsaday aad drive MacBook adag lagu soo bandhigi doonaa in uu furmo. Waxaad ka eegi kartaa sida badan files waxaad awoodi doontaa inaad dib u soo ceshano ka fayl file iyo magacyada file.
Markaas kaliya aad u baahan tahay in guji "Ladnaansho" dooro meel ku wadid kale way adag tahay in lagu badbaadiyo files soo kabsaday.
Kabsado My Photos Mac